UDavina Michelle i-transgender elandelayo kwi-Eurovision Song Contest? UDuncan Laurence ubona u-candidacy! : UMartin Vrijland
NgokukaDuncan Laurens, inkwenkwezi entsha uDavid Michelle kufuneka athathe inxaxheba kwi-Eurovision Song Contest ngonyaka ozayo egameni le-Netherlands. UDavina uphela nge. "Ewe njalo?"Ngoko ke uya kuba ngumgqwetha. Ndichazile kumanqaku amaninzi (umzekelo apha) ukuba amagama aphelile a soloko isetyenziselwa abantu be-transgender.
Sivele sibone i-LGBTI propaganda kwi-Eurovision Song Contest kwiminyaka yamuva. Kulo nyaka we-Eurovision Song Contest ye-Eurovision, kwakubonakala ngathi akukho bathathi-nxaxheba abachanekileyo.
Yintoni engalunganga ngayo? Akukho nto, ngaphandle kokuba kubonakala ukuba ulwabelana ngesini esithandana naye uqala ukungena ekhoneni elingenanto kwaye ukuba ukukhululwa kubonakala kutyhutyha kwi-propaganda ngendleko yindoda engqingiliyo. Ukusabalaliswa kwexesha elidala kwindoda-wesifazane kubonakala kunyanzelekile.
Ngako-ke unyaka olandelayo unxaxha? Omnye ongenalovuvu ngeli xesha kunye nezwi lentombi. Kunokwenzeka bonke. Akukho nto iphosakeleyo nento, ukuba ucela umntu oqhelekileyo waseDatshi. Ndifuna nje ukukhomba kuwe i-ajenda yeLuciferi ekhoyo emva kwayo. U-Lucifer ubhekisela kubuninzi (umhlaba omtsha / ihlabathi elitsha), utshintsho lwesini (ulwabelana ngesini / ngokwesini). I-Transgenderism kunye nokuguqulwa kwimiqathango yakudala yesondo ukuya kumgangatho we-LGBTI kubonakala ngathi ibharki yenguqu elandelayo: utshintsho olubhekiselele kwi-transhuman. Umntu njenge-digital digital kunye ngengqondo en DNA kwinethiwekhi ye-5G (intanethi yezinto, apho uya kuba enye yezinto).
Unokuthi undihlekise ngoku kwaye abaninzi baya kukugxotha njengendlela ekhulile okanye ekhethekileyo. Makhe ndacacile: andinanto echasene noDavina okanye nxamnye nabani na abanokhetho lwezesondo. Wonke umntu ngumphefumlo kwaye sonke silingana. Ngoko andinacaluli kwaye akusiyo indlela. Ndifuna nje ukuthetha nge-ajenda endicinga ukuba ndinokuyenza. I-ajenda ye-Luciferian forthold (i-aristocracy kunye neVatican, abadonsa imilingo emva kwayo yonke loo mademokhrasi).
Ngokusetyenziswa koomatshini balo bobuxoki, eli nqaba livakalisa ngokugqithiseleyo umyalezo esiwulinganayo. Yilapho kufuneka ithunyelwe khona. Zonke izikhoboka ezingabandakanyekanga ngokwesini kwi-digital digital (5G). Nangona kunjalo, igama elithi "lingana" lithetha into engekho enye. Indoda iyahluke kakhulu kwintombi. Yiyo yi-biology. Ukulingana akulingani. Nangona kunjalo, la magama amabini anqamana ngokufanayo kwiindaba ze-Orwellian.
Ngokuqinisekileyo andinakukubonisa ukuba uDavina ungumgqithisi kwaye ukuba kwakungenjalo, bekungekho into embi okanye embi, ngaphezulu okanye ngaphantsi. Ukuba kwakungekho, ndiyathemba ukuba akayi kuhlambalaza. Andifuni ukucaphukisa nabani na, kodwa nje ngongqinela kwinto endiyakholelwayo ukuba iya kugcinwa.
Ndixhalabele ukuba kukho inkohlakalo enkulu ye-LGBTI kunye (kwiminyaka yakutshanje ngokukodwa) i-agenda ye-transgender. Ngoko ukusola kwam kukuba uDavina usetyenziselwa le nto kwaye ngenxa yeso sizathu sokuba "wafunyanwa" ngumculi wePinki, utyhulwa nguMarco Borsato no-Armin van Buren kwaye ngoku iqhutywe phambili nguDuncan Laurence njengomviwa kwi-Eurovision elandelayo. umthendeleko womculo. Umzuzu ngaphandle kweenkqubo zonke zethelevishini apho uDavina esele eboniswe khona.
Ngoko sinokuphinda sibone iprogram ye-subliminal, apho ulutsha lulungiselela khona umgangatho omtsha.
Ingqungquthela yomsindo ovela kwingoma yase-Skywards (Amazwi), apho kubonakala ngathi inyaniso efihliweyo ukufihla:
Yidla, ulale kwaye nceda
Ude ukumkanikazi akayi kuvumelana
Uziva ukuba ungokoqobo
Nangona inkohliso iya kutywina idibanisa
Okanye uya kushiya yonke isidlo
'Ude ekhanda njengealiti
Yintoni engalunganga kwi-agenda ye-transgender okanye i-propaganda? Awunanto ukufumana into engalunganga ngayo. Noko ke, ukucinga kwam, kukuba, ukuba abantu bayilungiswa kwinkqubo yenguqu nge-transgender ukuya kwi-transhuman. Ngenxa yoko kubalulekile ukuba umzimba womntu kunye nengqondo ixhomeke kwifu, ukuze ingqondo kuphela ixhomekeke kwinkqubo yolawulo, kodwa i-DNA ingatshintshwa kwi-intanethi.
Ngoko ke ndicinga ukuba sikulungele inkqubo yobukhoboka bedijithali, ngelixa sicinga ukuba sinobubele kwizinto ezintsha zesondo zolutsha. Ngaba ucinga ukuba ibhuloho lide kakhulu? Xa ixesha lifika, alinakuphelelwa kwaye awukwazi ukwenza nto malunga nalo. Ndiza kukunika uluvo lwam, ngaphandle kokujolisa ukulimaza abantu okanye amaqela.
umthombo: saytimestimes.com, azlyrics.com
Umnkantsha, 'Ndinguye' e-'Amsterdam ', i-LGBTI kunye nokuzinikela phakathi kwe3
tags: Davina Michelle, Duncan, Eurovision, eziziimbalasane, umviwa, laurens, umthendeleko womculo, transgender
27 Meyi 2019 kwi-22: 00
Kwakhona ibakala elicacileyo elicacileyo. Ngoko ngoko kwabelwana ngaso kwiFB kunye ne-Twitter. Kodwa ingaba sivusa izimvu? Ngoko qhubeka uqhubeke noMartin.
28 Meyi 2019 kwi-02: 48
Ukuba unomhla namhlanje, kukulungele ukubuza ukuba bazisa isatifikethi sokuzalwa 😉
28 Meyi 2019 kwi-08: 08
I-World Health Organisation iye yabeka phambili ukulungelelanisa izifo malunga nokuphelisa izifo zangoku, ukongezelela ukutshatyalaliswa nokugqithiswa kwezemidlalo kuHlelo lwaMazwe ngamaZwe weZifo nokususa i-transgenderism ekuhambeni okulungileyo kwezopolitiko.
Ngakolunye uhlangothi, i-"Sexual incongruence", iphakanyiswe ngaphandle kwinqanaba lempilo yengqondo ngokupheleleyo, ibe "imeko enxulumene nempilo yesondo." Inkcazo ye-WHO ihlala ilondoloze ngakumbi kunamanye amazwe "-" ukuziphatha okuhlukileyo kwezesini kunye nezinto ezithandayo kuphela isiseko sokunikezela ukuxilongwa, "i-ICD-11 ifundeka, ithetha ukuba ayinakusetyenziswa kwiintsholongwane ngaphambi kokuba kuphele ubuntwaba kunye nabantu base-intersex bakwizandla malunga nolwimi olwamkelwa kwenye indawo kwisiqulatho, esibhekisela kwiintlobo zengxowankulu" phuhliso. "
28 Meyi 2019 kwi-17: 14
Ikwazisa kwakhona i-ajenda yokuchitha. Isandla esifihlakeleyo, umzekelo, senze uluntu luvuthile yonke into eya kubahambelana nayo! Ngokwenene yonke into kwinkqubo eyenzelwe yile ntsapho iyingozi kumntu wezinto eziphilayo! Abantu abayaziyo i-ajenda baya kuqhubeka bazibuze bona bafuna ukufa njani! Ngozuko kunye nesazela esilungileyo, okanye njengekhoboka loqoqosho kunye ne-cyborg kunye ne-matchstick! Iintsapho ezizama ukuphakama azishiyi umntu oseleyo (okanye yintoni efunekayo kuyo) ukhetho! Ngexesha labo lokutshintsha baya kudiliza yonke into baze bachithe oko kuya kuqhubeka bemi endleleni yabo!
29 Meyi 2019 kwi-12: 36
Kuba wonke umntu othi, "Ewe, kodwa andiboni i-apula ka-Adam"
29 Meyi 2019 kwi-12: 42
29 Meyi 2019 kwi-12: 44
I-scan yakho ye-CT ifakwe kwi-aple yokukhishwa kwe-aple yokuhlinzwa. Oku kubonakala kubalulekile kuba le yodwa indlela esazi ngayo indlela intambo yakho yokuzimela ifakwa ngayo ngokumalunga ne-cartilage.
29 Meyi 2019 kwi-12: 45
12 Septemba 2019 kwi-17: 33
Yintoni ephosakeleyo koku kukuba uhlengahlengiso kunye nengcebiso epheleleyo kunye namahomoni ahlawulwa kakhulu yi-inshurensi yezempilo, kodwa kungenjalo, umzekelo, ugqirha wamazinyo okanye i-physiotherapy. Kwaye ukuba wena njengomfazi akunakukhe nakuphi na ukwakheka kwesifuba kwaye ufuna ukwandiswa kwesifuba - nokuba sempilweni - awufumani mbuyekezo kodwa amadoda afuna ukuguqulwayo enza. Kwindawo endize kuyo ndafumanisa ukuba amabele asecaleni kakhulu ngexesha lotyando lwamadoda aguqukayo. Ayifumaneki kakuhle. Mhlawumbi xa ekule pleeboy.
Ngapha koko andiqondi ukuba ufuna ukuginya iihomoni zikushiye usenempilo kwaye nokuba ifunyanwa iqhelekile. Ewe, oko kunempilo kumanqaku ecaphuni. Ngeli xesha, iihomoni zokwenziwa zitshabalalisa impilo yakho iphela. Cinga ukuba baya kuphila ixesha elide, benobungozi bomhlaza.
« Iziphumo zaseNetherlands ziphumo kwiinyanga ze-4 ukusuka kwesokudla ukuya kwesobunxele ukuya kwiTimmermans? Abavoti baphula!
UMichael P. Thijs H. Jos B. zonke iimeko zamatyala ezokubulala zikhokelela ekusungulweni ngokukhawuleza komthetho wokukrakra ochaphazela wonke umntu »
Iindwendwe ezipheleleyo: 16.205.487
SalmonInClick op Umnyhadala wokwenza intsholongwane ka-corona kwiiveki ezi-201 ngaphambi kokuqhambuka, uxelisa imeko efanayo
Cubungula op Umnyhadala wokwenza intsholongwane ka-corona kwiiveki ezi-201 ngaphambi kokuqhambuka, uxelisa imeko efanayo
SandinG op Isicwangciso sokugonyela esinyanzelekileyo seNetherlands ngoDisemba ka-2019 sizisiwe
Riffian op ILibya ibonelela ngokucacileyo malunga namazwe aseYurophu ukuba angowokuqala ukuthathwa yiTurkey